အိမ်မှာ Lock Down လုပ်ရင်း Youtube ကအထူးအဆန်းတွေ လုပ်ကြည့်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ နေခြည်ဦး - Cele Gabar
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း ဗျူးတီးဘလော့ဂါတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နေခြည်ဦးကတော့ ပရိသတ်တွေကို အမြဲလိုလို အသစ်ဆန်းလေးတွေ တင်ဆက်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ ။ လူငယ်ပီပီ ပေါ့ပါးသွက်လက်ပြီး ထက်မြက်တဲ့သူလတ်တလောမှာ Covid 19 ကြောင့် အိမ်တွင်းအောင်းပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို Lock Down လုပ်ထားပါတယ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ ..။
ဒီနေ့ကတော့ ချီချီရဲ့ သုံးရက်မြောက် Lock Myself Down နေ့လေးဖြစ်ပြီး မဖြစ်ဖြစ်အောင်တော့ ကြိုးစားနေပြီးနေနေရတယ်လို့ သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထားပါတယ် ။ လမ်းသရဲခြေချုပ်မိတာဆိုတော့ တော်တော်တော့ ပျင်းနေရတာပေါ့
မနက်ဖြန်ကျရင်တော့ youtube ကကြည့်ထားသမျှ Cooking . Baking Flavored Water လေးတွေ လုပ်ကြည့်ဖို့စဉ်းစားထားတယ် လို့ လည်း ပရိသတ်တွေကို ဖေ့ဘုတ်စ်စာမျက်နှာထက်ကနေ အသိပေးထားတာတွေ့ရပါတယ် ။
အိမ်မှာနေရင်း အိပ်လိုက်စားလိုက်မလုပ်ဘဲ အသစ်ဆန်းတွေကို အမြဲ ပရိသတ်တွေကို ချပြချင်နေတဲ့ချီချီကတော့ Youtube ကြည့်ပြီး ပရိသတ်တွေကို Cooking . Baking Flavored Water လေးတွေလုပ်ပြဦးမယ်ဆိုတော့ ချီလီလေးတွေကလည်း အရမ်းကိုကြည့်ချင်လွန်းလို့ စာင့်မျှော်နေကြပါပြီနော် ..။ ချီချီကိုချစ်တဲ့ ချီလီလေးတွေအတွက် အိမ်မှာတစ်ကိုယ်တော် အနားယူနေတဲ့ နေခြည်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။